Posted by တန်ခူး at 4:16 PM
ဒီပို့စ်ကိုရေးတဲ့အတွက် အထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ် တန်ခူးရေ။ အလျော်ပေးတယ်ဆိုပေမယ့်လည်း အခုပို့စ်က ပြန်ရလိုက်တဲ့ တန်ဘိုးက အင်မတန်ကြီးမားပါတယ်လို့ ပြောလိုပါတယ်။
တကယ်တော့ ကျနော်လည်း ဟိုးတလောက ယောင်နင်းဘရက်ဒ် www.yawningbread.org မှာ ဂေးတွေအကြောင်းဖတ်ရမှ သူတို့ရဲ့ ဒုက္ခနဲ့ ဘ၀တွေကို ပိုမိုနားလည် စာနာသဘောပေါက်လာတာပါ။
မြန်မာလူမှုဝန်းကျင်မှာရော၊ မြန်မာမဟုတ်တဲ့ နိုင်ငံတော်တော်များများက လူ့ပတ်ဝန်းကျင်တွေမှာ ဂေးတွေအပေါ် နားလည်စာနာစိတ်မရှိဘဲ နှိမ်ပြီး ခွဲခြား ဆက်ဆံတာမျိုးတွေ ကြီးစိုးနေတယ်။
အဲသလို လူကို လူချင်း ခွဲခြားဆက်ဆံတာတွေဟာ လူအချင်းချင်း မေတ္တာထားရမယ်ဆိုတဲ့ ဗုဒ္ဓတို့ ယေရှုခရစ်တို့ရဲ့ အဆုံးအမတွေနဲ့လည်း မကိုက်ညီပါဘူး။
တကယ်တော့ လူရယ်လို့ဖြစ်လာရင်… ကြီးသည်ဖြစ်စေ၊ ငယ်သည်ဖြစ်စေ၊ ဖြူသည်ဖြစ်စေ၊ မဲသည်ဖြစ်စေ၊ ဆင်းရဲသည်ဖြစ်စေ၊ ချမ်းသာသည်ဖြစ်စေ ကျားမမဟူ မည်သူ့ကိုမဆို လူသားတယောက်အနေနဲ့ ထားသင့်ထားအပ်တဲ့ လူသားဂုဏ်သိက္ခာကို လေးစားခြင်းဆိုတဲ့ အပြန်အလှန်လေးစားမှုဟာ လိုအပ်ပါတယ်။ လူတယောက်ရဲ့ Sexual Orientation ခေါ်တဲ့ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ ကွဲပြားခြားနားမှုဟာ အဲသည်လူတယောက်အတွက် အားနည်းချက်၊ အားသာချက် စသဖြင့် ခွဲခြားဆက်ဆံခြင်းငှာ မသင့်ဘူးလို့ တိုးတက်ယဉ်ကျေးလာတဲ့ လူ့အဖွဲ့အစည်းတွေမှာ သိမြင်သုံးသပ်လာကြပါတယ်။
အခုလိုမျိုး အတွေ့အကြုံနဲ့ ယှဉ်တဲ့ ပညာပေးပို့စ်မျိုးလေးတွေအတွက် ကျေးဇူးတင်ကြောင်း ထပ်လောင်းပြောကြားလိုက်ပါတယ်။
တစ်ခြားသူတွေတော့မသိဘူး အစ်မတန်ခူးရဲ့ ကြီးကြီး အကြောင်းတော့ စိတ်ဝင်စားစရာတွေနဲ့ပြည့်နေတာပဲ ။ တော်လည်းတော်တယ် ဒီဘက်ခေတ်မှာတော့ ဒါမျိုးတွေ သိပ်ပြီး ပစ်ပယ်ကြမယ်မထင်ဘူး( ထင်တာနော်) ထိုင်းမှာောတ့ သူတို့တွေကို နေရာပေးပါတယ် ရုပ်ရှင်တွေ ကြော်ငြာတွေ နောက်တွေ့ဆုံးမေးမြန်းတာတွေ မှာ သူတို့တွေကိုမကြာမကြာတွေ့ရတယ်။ ကျနော်က အများကြီးတော့မသိဘူး အပြင်ပိုင်းရုပ်လွှာနဲ့ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ကောင်းတဲ့သူတွေဆိုရင်တော့ ကြီးငယ်မရွေး ပေါင်းဖြစ်ပါတယ် ။ ဒီပို့စ်လေးအတွက် ကျေးဇူးပါ အစ်မ
kom: လေနုအေးကိုတော့သွားဖတ်ြ့ပီးပါပြီး ကိုပေါ ဆွေးနွေးနေတာ တွေ့တာနဲ့ ပြန်လာခဲ့တယ်။
သိပ်ကောင်းတဲ့ ပိ်ု့စ်ပါပဲ... တကယ်တော့ သူတို့တွေက အရင်ဘဝက ဝဋ်ကြွေးတွေကို ပြန်ပေးဆပ်နေရတာပါ...
ဖတ်ပြီး စိတ်မကောင်းဘူး အမရယ်.. အရင် ဘ၀တွေက ၀ဋ်ကြွေးတွေပါပဲ.. အမသာရှေ့က စကားမကြောင်းခဲ့ဖူးဆိုရင် အမ ကြီးကြီးကို ယောင်္ကျားလေးလို့ ထင်မိမှာ မဟုတ်ဘူး..
အမနုစံပြောသလို တကယ်ကို စိတ်မကောင်းပါဘူး။
အမတန်ခူးက စာရေးလည်းကောင်း အကြောင်းအရာကလည်းကောင်းတော့ ဖတ်ရတာ ခံစားရတယ်။
မတန်ခူးရေ ... ကိုပေါပြောသလိုပါပဲ ... ကြီး ငယ်၊ ကျားမ .. မရွေး အပြန်အလှန် လေးစားမှုရှိဖို့က အဓိကပါပဲ။
ကျွန်မ သင်ရတဲ့ UK ရဲ့ Employment Law မှာ အလုပ်ခန့်အပ်တဲ့နေရာမှာ အသက်အရွယ်ခွဲခြားခြင်း၊ လိင်ခွဲခြားခြင်း စတာတွေဟာ ဥပဒေနဲ့ မညီဘူးလို့ ဖော်ပြထားပါတယ်။
ကျွန်မတို့ အမျိုးထဲမှာတော့ မတန်ခူးရဲ့ ကြီးကြီးနဲ့ ပြောင်းပြန် ယောက်ျားလျာ တယောက်ရှိပါတယ်။ သူကလည်း ယောက်ျားတို့ တပ်အပ်တဲ့ လက်သမား ပညာတို့ ဆေးသုတ် ဆေးမှုတ်တာတို့ .. ပုံနှိပ်စက်ပညာတို့ အကုန်ရတယ်။ ကျွန်မတို့လည်း သူ့ကို ဦးတပ်ခေါ်တာပဲ။ နောက်နောက် ပြောင်ပြောင်လဲ မလုပ်ရက်ကြဘူး။ ခုတော့ ကွယ်လွန်သွားပါပြီ။
မတန်ခူးစာ ဖတ်ရတော့ အဲဒီဦးကို သတိရမိတယ်။
မတန်ခူးစာရေးတာကောင်းလှပါတယ်။ သူတို့အကြောင်းတွေက စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းပြီ သနားစရာလည်းကောင်းပါတယ်။
မတန်ခူး ကြီးကြီးက..ချစ်စရာကောင်းလိုက်တာ။ ဟုတ်ပါတယ်။ ဒါမျိုး အခြေအနေတွေက..အတင်းပြောင်းယူလို့မရပါဘူး။ ခုပြောကြသလို..၀တ်ကြွေး ..မဟုတ်ရင်လဲ.. genetic imprint မှားယွင်းတာလား- ထူးခြားဆန်းကြယ်တာလား။ လူ့အခွင့်အရေးတွေ သိပ်အလေးထားတဲ့ ဒီဖက်ခေတ်တွေမှာတော့..ခု..မတန်ခူး ဆုတောင်းသလို..၀တ်ရှိရင် ကျေပါတော့လို့..သနားစရာ တောင်းပေးရင်တောင်..တမျိုးတမည်ဖြစ်နေပြီလားမသိ။ Transgender ဆိုပြီး..ဒီအတိုင်းပဲ လက်ခံနေကြပြီလေ။ မိန်းမဘ၀ ကနေ ယောက်ကျားစိတ်ပေါက်နေတဲ့..ကျမတို့ဆရာတယောက်အကြောင်းကိုတောင်..`ဂေး´ ဆိုတဲ့ ပို့စ်တခု ရေးဘူးသေးတယ်။ တကယ်တော့..မတန်ခူး မေမေ ပြုစု အသုံးချ တတ်တာလဲ..တော်တော်ချီးကျူးဖို့ကောင်းတယ်။
အခုဆို ဟိုနိုင်ငံမှာသွားပြီး ပြောင်းလို့ ရတယ်နော်။
တော်လိုက်တာ .. ကိုယ့်ထက်တောင် မိန်းမ ပီသ နေသေးတယ်။ အဲလိုကြီးကြီးမျိုး ရချင်လိုက်တာ။
ဖတ်လို့ကောင်းလိုက်တာဗျာ... မမတန်ခူးယုံကြည်သလို ဒီလောက်စိတ်သဘောဖြူစင်သူဟာ နောက်ဘ၀တွေမှာ (၀ဋ်ကြွေးကုန်ရင်) အခုလိုအဖြစ်ကနေ ကျိန်းသေလွတ်မြောက်မှာပါ။ တကယ်တော့ ဒီလိုလူမျိုးတွေကို မပစ်ပယ်သင့်ကြပါဘူး။ သူတို့လည်း လူထဲကလူဖြစ်တဲ့အတွက် ချစ်တတ်၊ သနားတတ်၊ ကြင်နာတတ်၊ ကူညီတတ်ကြပါတယ်။
မတန်ခူးရေ အစ်မရဲ့ ကြီးကြီးအကြောင်းက တကယ် စိတ်ဝင်စား စရာကောင်းပါတယ်။
ထူးခြားတဲ့ ပိုစ့်လေး အတွက် ကျေးဇူးပါ။
တို့ လဲ တွေ့ ဖူးတယ်..။ အဲဒီသူမျိုးတွေဟာ သာမန် ယောင်္ကျား မိန်းမတွေထက် ပိုပြီး ထူးချွန်တတ်တယ် ဆိုတာ တကယ်ပါပဲ...။ သူတို့ က ကြိုးလဲ တအားကြိုးစားကြတယ်..။ သူတို့ ကိုယ် သူတို့ လဲ အရင်ဘ၀တွေက ဝဋ်ကြွေးကြောင့်လို့ သိနေကြတယ်။ ဒါကြောင့်လဲ ကုသိုလ်ရေးတွေမှာလဲ သူများတွေထက် ပိုပြီး တက်တက်ကြွကြွ ပါဝင်တတ်ကြတယ်...။ အလှုအတန်း ရက်ရောကြတယ်။ တကယ်ဆိုရင် သူတို့ဘ၀လေးတွေက သနားစရာကောင်းပါတယ်...။ ဒါကို လူတော်တော်များများက နားမလည် မညှာတာ မစာနာဘဲ နှိမ်ချတတ်ကြသေးတယ်နော်...။
အတ်ိတ်ဘ၀ရဲ့ ၀ဋ်ကြွေးအရ ဘယ်လို ဘ၀မျိုး ရောက်ရောက် လက်ရှိဘ၀မှာ ကိုယ့်စိတ်ကို ကိုယ် တတ်နိုင်သမျှ ဖြူစင်သန့် ရှင်းအောင် ထားတတ်ဖို့ က အရေးကြီးဆုံး ဆိုတဲ့ စကားလေးကို သဘော အကျဆုံးပါဘဲ...။
ကြီးကြီးက ချစ်စရာကောင်းလိုက်တာ။ သူ့ရဲ့ မေတ္တာနဲ့ စိတ်စေတနာကြောင့် ယောကျာင်္း မိန်းမဆိုတာကြီး ပျောက်ပြီး အမနဲ့အတူ ချိုသင်းတို့ပါ ချစ်ခင်မိရအောင် အရေးကောင်းသလို တကယ်လဲ သူတော်ပါတယ်။ မတန်ခူး ကံကောင်းလိုက်တာ။
သူအားသာတဲ့ အချက်ကို အမ မေမေက ပျိုးထောင် ပေးတတ်လို့ ပိုအဓိပ္ပါယ်ရှိရတာ လို့ မြင်မိတယ်။ အနှစ်သာရသာလျှင် အဓိကလို့ ခံစားရတယ်။
တန်ခူးစာရေးကောင်းတာ.. လက်စသတ်တော့ စာရေးဆရာမကိုး။
ယောကျာင်္းပဲ ဖြစ်ဖြစ် မိန်းမပဲဖြစ်ဖြစ်.. လူသားတစ်ယောက်ရဲ့ဘ၀မှာ တန်ဖိုးရှိရှိ ဖြတ်သန်းဖို့က အဓိက လို့ ထင်တာပါပဲ။ ဘယ်လိုမှ ပြောင်းလို့ မရအောင် ဖြစ်လာတာကတော့ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအရရော .. အတိတ်ကံတွေ ကြောင့်ရော ဖြစ်လာတာမို့ ပတ်ဝန်းကျင်ကပါ လက်ခံလိုက်ဖို့ လိုမယ် ထင်ရဲ့။
ကြီးကြီးက တန်ခူးတို့ကို တကယ် ပြုစုပျိုးထောင် အားပေးခဲ့တာပဲနော်.. တန်ခူး မေမေတို့ ချစ်ခင်ခဲ့လို့ ကြီးကြီးလည်း ကံကောင်းပါသေးတယ်လေ..။
စိတ်ထားကောင်းတဲ့ ကြီးကြီး ၀ဋ်ကြွေးရှိရင် သည်ဘ၀မှာပဲ ကျေပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ် တန်ခူးရေ။
အခုပို့ စ်လေးရေးတင်လိုက်တဲ့ အတွက် တည့်မတ်စွာ ကိုယ်ချင်းစာစိတ်နဲ့ မြင်တတ်သူလို့ သတ်မှတ်ပြီး
ကျနော့်ဘ၀မှာ အများကြီးတွေ့ ဘူးတယ်..
တစ်ချို့ တွေက ခွဲခြားနှိမ်ချဆက်ဆံကြပေမယ့်
အဲဒီစိတ်ဓါတ်တွေကို ကျနော်က မကြိုက်ဘူးဗျ...
သူတို့ ကို နားလည်ပေးကြည့်ပါ...။
ကံ ရဲ့ ဖြစ်တတ်တဲ့ သဘောကို ကြည့်မယ်ဆိုရင် လက်ရှိလူဖြစ်နေတဲ့ သူ့ မှာ အပြစ်မရှိပါဘူး...
အဌားခန္ဓာမှာ ၀င်နေကြတဲ့ ဘ၀မှာ မိခင်ဝမ်းထဲ
၀င်စားချိန်ကစလို့ ...သူပိုင်ဆုံးဖြတ်ချက် ချနိုင်တဲ့ ဘ၀မှ မဟုတ်တာ...လက်ရှိဘ၀မှာ ဒီကိုယ် ဒီစိတ်ဖြစ်နေရတာ အတိတ်ကံ က ဖန်လာတာလေ...
ဒါက သံသရာ အမြင်ပါ...ဆေးပညာအရဆိုရင် မိခင် ဖခင်နဲ့ ဆိုင်ပါတယ်...။
၀မ်းထဲက ပဋိသန္ဓေမှာ ကျားဟော်မုန်းဓါတ် များခြင်း ၊
မဟော်မုန်းဓါတ်များခြင်းဟာ မိဘနဲ့ ဘဲဆိုင်ပါတယ်..
ဆေးပညာအမြင်နဲ့ ဆို ဟော်မုန်းဓါတ်ရာခိုင်နှုံး များရာဘက်ကို ဗီဇပြတာပါဘဲ...
ကျနော်က ဆေးပညာရှင်မဟုတ်တော့ အကြမ်းဖျင်းဘဲ ပြောနိုင်တာပါ...
ကံတရားနဲ့ ဘဲ ကြည့်ကြည့်၊ ဆေးပညာနဲ့ ဘဲ ကြည့်ကြည့် ငါသာ သူ့ နေရာမှာ လူဖြစ်ခဲ့ ရင် ဆိုတဲ့ အတွေးနဲ့ ကြည့်ရင် သူတို့ တွေကို ကိုယ်ချင်းစာတတ်ပါလိမ့်မယ်...
ကြီးကြီး သာအစက မရှိခဲ့ ရင်....
မတန်ခူး ဆိုတာတောင် ဖြစ်ချင်မှ ဖြစ်မှာဗျ...။
ဟုတ်ပ မတန်ခူးရယ်..ကြီးကြီးက ချစ်စရာ ကောင်းလိုက်တာ..။ အမကတော့ နဂိုတည်းက သူတို့တွေနဲ့ နေလေ့ရှိခဲ့တော့ သူတို့နဲ့ ပတ်သက်ရင် ပြဿနာလို့ မထင်မိဘူး။ ပတ်ဝန်းကျင်တချို့ရဲ့ သတ်မှတ်ချက်တွေအတွက် စိတ်မကောင်းတာပဲ ရှိပါတယ်။ မတန်ခူးရဲ့ကြီးကြီး ကျန်းမာချမ်းသာစွာ.. အသက်ရှည်ပါစေ..လို့ ဆုတောင်းလိုက်ပါတယ်။
မတန်ခူးရဲ့ ကြီးကြီးက တော်လည်းတော် ချစ်စရာလည်းကောင်း။ အဲဒီလိုလူမျိုးတွေဟာ သူတို့ကို သူတို့ ခန္ဓာကိုယ် အမှားထဲကို ၀င်စားမွေးဖွားလာတယ်လို့ ခံစားကြရတတ်ပါသတဲ့။ gender ပြောင်း ၀တ်စားနေထိုင်ခွင့် မရမချင်း ချောင်ပိတ်မိနေတယ်လို့ ထင်ကြပါသတဲ့။ ဘာအကြောင်းကြောင့်ပဲ ဖြစ်ဖြစ် သူတို့ဘ၀မှာ သူတို့ နေတတ်ပျော်ရွှင်ပြီး သူတို့ပတ်ဝန်းကျင်ကိုလည်း တစ်နည်းနည်းနဲ့ အကျိုးပြုနေရင် ၀မ်းသာစရာပါ။ ယူကေမှာ မကြာမီလေးကတင်ပဲ ပြည်သူထဲက ပါရမီရှင် အဆိုပြိုင်ပွဲ Britain's got the Pop factor မှာ နောက်ဆုံးနိုင်သွားတာ ယောက်ျားဘ၀ကနေ ထိုင်းမှာ ခွဲစိတ်ကုသပြီး မိန်းမဘ၀ ပြောင်းလိုက်တဲ့ Geraldine ဆိုတဲ့ အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ပါ။ သူ့အကြောင်းကို သတင်းစာတွေက ဖော်လိုက်ပြီးနောက်ပိုင်း သူကိုယ်တိုင် ၀န်ခံဖြေရှင်းလို့ ပြည်သူတွေက အမြင်ကြည်လင်စွာ လက်ခံကြပါတယ်။ ပြည်သူ ပေးတဲ့ မဲ Vote နဲ့ အဲဒီပြိုင်ပွဲကို သူ နိုင်သွားပါတယ်။ နောက်ဆုံးအဆင့်မှာ တယ်လီဖုံးကနေ ပေးတဲ့ မဲပေါင်း (၅၂)သန်း ရှိခဲ့ပါသတဲ့။ ကျား မ ကျားမ မကျား ဘာဖြစ်ဖြစ် လူတစ်ယောက်ရဲ့ အရည်အချင်းနဲ့ စိတ်ဓာတ်ကသာ အဓိက ဖြစ်ပါတယ်။
အစ်မကြီးရေ့ နေကောင်းလား အလုပ်တွေ ရှုပ်နေတယ်ဟုတ်း) သားသား ကျောင်းမှာ ပျော်နေပြီထင်ပါ့ ။
အစ်မရေ။ ပို့ စ်အသစ်မတွေ့ ပါလား။ ပျောက်နေတယ်နော်။ သားလေးကော နေကောင်းရဲ့ လား။ အကုန်လုံး ကျန်းမာ ပျော်ရွှင်ပါစေနော်။
အမတို့မိသားစုလေး နှစ်သစ်မှစ၍ အေးချမ်းခြင်း ပျော်ရွှင်ခြင်း အစရှိတဲ့ မင်္ဂလာရှိသောစကားများနှင့်သာ တွေ့ကြုံပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးပါတယ်..အမရေ..
အမရေ.. ရှေ့လျှောက် ဘလော့မလည်နိုင်တော့ဘူးအမရေ.. နှစ်သစ်ကနေ စပီး ပိုအလုပ်ရှုပ်တာ သင်္ကြန်အထိပါ အမရေ..။
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် အားတဲ့အခါတော့ အမဆီ လာပါ့မယ်..
If convience, please write another post how she train on ur brother. Should be now u can open her own shop. So she can more enjoy on her life and you can give back her kindness...
plz read for your son,
This post is really nice and imitate .
နှစ်သစ်မှာ စိတ်ချမ်းသာ ကျန်းမာ ပျော်ရွှင် အောင်မြင်ပါစေလို့ အမတို့ မိသားစုလေးကို ဆုတောင်းပေးပါတယ်။
¯`*•.¸,¤°´'`°¤,¸.•*´¯) ¸,¤°´'`°•.¸O¸.•°´'`°¤,¸ ♥Happy New Year!2009.¸¸¤°´'` (_¸.•*´'`°¤¸'¸¤°
ပျော်ရွှင်သောနှစ်သစ်ပါ တန်ခူးရေ......... ၂၀၀၉ ခုနှစ်မှာလည်း တမိသားစုလုံး ကျန်းမာချမ်းသာပြီး လေနုအေးကလည်း တသွင်သွင့်နော့နေဆဲကို နိုင်ပါစေကြောင်း ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်။
မတန်ခူး ပျောက်နေတယ်နော်။ အားလုံး အဆင်ပြေပါစေ။ နှစ်သစ် မင်္ဂလာပါ။
မင်္ဂလာနှစ်သစ်မှာလည်း လေနုအေးလေး တနွဲ့နွဲ့ နော့ဆဲဖြစ်ပါစေ
၂၀၀၉ ရဲ့ နေ့ရက်တွေတိုင်းကို ချစ်သောမောင်၊ ချစ်သော သားသားလေးနဲ့အတူတူ
အဆင်ပြေ ပျော်ရွှင်စွာ ဖြတ်သန်းနိုင်ပါစေ လို့ 
မတန်ခူးရေ.. ရန်ကုန်ပြန်နေတယ် ထင်တယ်.. :)
အမရေ.. မင်္ဂလာရှိသော နှစ်သစ်ဖြစ်ပါစေ.. မိသားစုတွေ နှစ်သစ်မှာ ပျော်ရွှင်ကျန်းမာပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးပါတယ်.. Happy New Year 2009!!
ပျောက်နေလို့ နှစ်သစ်အကူးမှာ လာနှုတ်ဆက်သွားပါတယ် တန်ခူးရေ။ ပျော်ရွှင်ပါစေ။ စာတွေလည်းရေးပါအုန်း။ အခေါက်တိုင်း ကွန်မန့်မရေးဖြစ်ပေမယ့် အမြဲလာအားပေးနေတဲ့ အမာခံပရိသတ်ပါဗျာ။
Happy New Year အစ်မရေ့ တစ်မိသားစုလုံး နှစ်သစ်မှာ ပျော်ရွှင်ပါစေ။
အစ်မ အကြာကြီးဘယ်ပျောက်။ နေမှကောင်းရဲ့ လား။
အမရေ မတွေ့တာကြာပြီ။ နေမှကောင်းရဲ့လားဗျာ။ အဆင်ပြေပါစေနော်
လွမ်းလို့ လာခဲ့ပြန်ပြီ။ စိတ်လက်ကြည်သာမှ၊ အချိန်အားမှ စာရေးပါ။ ကိစ္စမရှိပါဘူး။ သတိရလို့ လာလည်တာပါ။ အစစ အဆင်ပြေပါစေနော်။
အမတန်ခူးရေ ပေါ်လာနိုးပေါ်လာနိုးနဲ့ မျှော်ရတာမောပါပေါ့။
"Wut" is notabasic trigger of being gay. Who exactly knows they committed something in their former lives. Hormone proportion isamajor reason. All people don't have to feel pity upon them. They are also human beings like all of you. They have all ability as u have. In your life, have you ever seen gay begger or idiot or undutiful family member? They have to try better than others because other always look down to them.
Awesome web site, I hadn't come across laynuaye.blogspot.com before during my searches!
top [url=http://www.c-online-casino.co.uk/]casino[/url] check the latest [url=http://www.realcazinoz.com/]online casinos[/url] free no consign bonus at the best [url=http://www.baywatchcasino.com/]baywatchcasino